Ngaba i-Empathic Your Tendencies Inokukulimaza Kakhulu Kunokukunceda?
Unxibelelwano lwe-Telepathic kunye ne-OverSoul yakho
Le ngcaciso ebhaliweyo ngumculi kunye neengcali, uBj uKumkani, inceda kakhulu kwi- hypersensitives . Abaphili bahlala bexhamla kwiinkonzo zabaxhasi kwiqondo elifanelekileyo ukuze bakwazi ukudibanisa neempawu, imiba kunye nanoma yiyiphi into evelele. Ngokufumana ulwazi ngale ndlela abaphili be-intuitively baxilonga baze banikele unyango. Nangona oku kuyenziwe ngokuqaphelayo, kunokuhlala kunamaxesha apho kunzima ukuhlukanisa oko kungowomthengi kunye noko kungenjalo.
Ngokomzekelo, ndandinomthengi kwitheyibhile yokuphilisa, malunga neyiphi indlela yokuphilisa lam idolo ekhohlo yaqala ukuva intlungu. Ndacinga intlungu kwaye ndagqiba ekubeni intlungu yayihlangene nomthengi. Kodwa ngelo xesha, ndandimile kwiinyawo zam ngenxa yemihla emininzi kwaye ndaqonda ukuba inokwenzeka ukuba ibhotlo lam linginika ingxaki. Ukuqinisekisa ubungqina bam kuqala bokuqala, ndacela umxhasi ngegama lakhe. Wayevuma ukuba ngokwenene wayenomcimbi oqhubekayo kunye nomxhasi wakhe okhohlo. Njengomlinganiselo wesigqibo ndizimisele ukucaca ekufumaneni ulwazi ngendlela ekhuselekileyo neyiyo.
Ingxaki enkulu ivela xa uxhulumaniso lwe-empathic kunye nabanye abantu lwenziwa ngaphandle. Ngaba uke waba nesimo sengqondo esihle kwaye emva kwemizuzu yokuba ujikeleze abanye abantu okanye ungene kwindawo eyahlukileyo indlela uvakalelwa ngayo ngokwenene uguqula into yokugubha okanye ukuxakaza?
Ewe, uthabathe amandla ongeyenawe. Nceda uthathe ixesha lokufunda eli nqaku, lixesha lokutshintsha indlela yethu yokuthatha amandla angenawo.
Ukunqoba Ukungazi kakuhle i-Empathic ngokuKhethwa koBuchule ngokuManyeneyo
Inqaku leNdwendwe nguBj uKumkani (owashicilelwe ekuqaleni kwiNamaste, Inc. Newsletter)
Xa sizalwa siba netyekelo lokunyamekela njengabantwana abancinci. Sinemida emiselweyo. Sithutha amasimu ethu kumandla kunye nakwiindawo zamandla zabanye abantu ukuze sihlole indlela abavakalelwa ngayo. Senza oku ngokwesizathu ngezizathu ezahlukahlukeneyo, ezifana "
Ukukwazi ukufumana oko sifuna.
Ukuze siqonde oko sikujikelezile.
Njengoko sikhula, abanye abantu bafunda ezinye iindlela zokukhusela, ukuqonda ukuthetha, okanye iindlela zokufumana ulwazi.
Abanye abantu abafundanga ezinye iindlela kwaye baqhubeka bexhala , befana ne-sponge-like in the energy energy, ulwazi kunye nemvakalelo evela kwabanye abantu. Aba bantu bakuthola kunzima ukuqonda apho bayeka khona kwaye omnye umntu uqala. Unomdla wokuvumela imida yabo ukuba ihlaselwe ngabanye abantu. Abayiqondi imida yemida . Xa umntu evakalelwa kukuba kunzima ukuba babe nomfanekiso wokuzibonakalisa kakuhle ongalawulwa ngcamango zabanye abantu ngabo. Abanayo impembelelo ecacileyo ye-self hood kunye "nabanye." Esi sipho sokukwazi ukufunda abanye abantu ngokugqithiseleyo siyaba sisiqalekiso ngaphezu kwesipho.
Yisikhathi sokuyeka ukuba ne-empathic kwaye kunokuba ufumane ulwazi kunye nabanye abantu ngokuxhumana ngqo ne-Oversoul.
Xa sinobubele siyaqokelela ulwazi kwabanye kwaye sithwele yona, okanye sisebenzela yona, singazi. Kunzima ukwahlula phakathi kweemvakalelo zethu neemvakalelo ezivela kwabanye. Ukuba nomoya kubangela ukuba abantu abaninzi banqine kakhulu kwaye bavelele ngokwemvakalelo. Singayeka ukwenza ukungaqondi kakuhle ngokufaka ama-balloon ngamabhaso enamandla okuzithiba, kunye nokuba nenjongo yokunxibelelana nge-telepathically (kunokuba sithandane) kunye nama-Oversouls abo sidibana nawo.
Incomo: Khumbula njalo, into endiyibhalayo iimbono zam namava. Thembela kuphela intuition yakho. Yithembele kuphela into ehambelana nenyaniso yakho - bj
bj uKumkani, umculi kunye ne-mystic, ngumongameli we-Namaste, Inc., inhlangano yemfundo engokomoya engeyona inzuzo, esekelwe e-Oklahoma City naseDenver, CO. Usebenza ngokulinganayo njengesiqhagamshelwano phakathi kwe-Intergalactic Federation, i-Spiritual Hierarchy, Umbuso weeNgesi kunye noBuntu.
Inyaniso Ngokulahleka Kweentsimbi
Uluhlu lweMpawu kunye ne-Wardrobe yakho
Ukujamelana neengxaki zokuba noNyana kunye neColic
Muhammad Ali All-Time Ukulwa Imbali
Kutheni ufumana i-Ph.D yoQoqosho?
Yintoni eyenziwa yi-ACT Scores Ethethayo kwi-College Admissions Data?
I-Side Sexy and Romantic Side to Astrological Sign Aries
Injongo kunye Nokubunjwa kwee-Adipose Tissue
Indlovu isebenzisa njani iTrunk?
Fumanisa amazwe angama-14 ye-Oceania
Eyona ndlela inkulu kakhulu yaseShayina
Iimpawu zeDonald Trump kunye neMemes
Imimangaliso kaYesu: Ukuphilisa uMfazi oBholayo kwisihlwele
Indlela yokudweba i-2 Point Point
Izibalo zee-Admissions zeekholeji zeDartmouth
20 Imbali yobuGqirha obuninzi kakhulu
Imizobo yase Djibouti
Crackback - Inkcazo kunye Nenkcazo